जनसांख्यिकीको परे: उन्नत श्रोता खण्डहरूका प्रकार जुन मापन योग्य स Eng्लग्नता ड्राइभ Martech Zone
मार्केटिंग अटोमेसनका लागि तपाईलाई विश्वास गर्ने जुनसुकै गुरु, र मार्केटले यसलाई सुस्त बनाउँदछ। प्राय: जसो, हामी लीड्सलाई संलग्न गराउने र पोषणको लागि मार्केटि Auto स्वचालन प्रयोग गर्दछौं। यो ड्रिप अभियानको साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ, र व्यवहार को ट्रिगर अधिसूचना को लागी उनीहरु लाई कार्यवाही गर्न। मेल मर्ज अर्को स्वर्ग-पठाइएको सुविधा हो। विषयमा प्रत्येक, एकल प्राप्तकर्ताको नाम र तपाईंको ईमेलको पहिलो लाइन समावेश गर्ने अवसर एक असफल रूपान्तरण-क्लिन्चर हो…
सत्य केवल मार्केटिंग स्वचालन मात्र होइन गर्न सक्छन् धेरै धेरै जानुहोस्; यो पनि कि यो छ आवश्यकता धेरै अगाडी जान। तपाईंले उनीहरूलाई उनीहरूको पहिलो नामबाट बोलाउनु भएको छ, तर तपाईंको ईमेलको बाँकी भाग हाड्रम हो, त्यहाँ-भैरहेको छ, र यो व्यक्तिगत छैन। साँच्चिकै अनौंठो सामग्रीलाई थप आवश्यक छ। विशेष रूपमा, यसको लागि स्पष्ट विभाजन आवश्यक छ, जनसांख्यिकीय बाहिरी, ग्राहकलाई चिन्न, उनीहरूले के बुझेछन् बुझ्न, र उनीहरूको आवश्यकतामा सीधा कुरा गर्न।
मार्केटि Se सेगमेन्टेसन डेमोग्राफिक्स भन्दा पर जान्छ
दर्शक विभाजन कुनै नयाँ कुरा छैन। काश, यो यति नयाँ छैन कि अब यो न्यूनतम छ; कुनै पनि उद्योगमा मार्केटि teams टोलीबाट अपेक्षा गरिएको। यसमा व्यवसायको मार्केटिंग दर्शकहरूलाई उप-समूहमा अलग गर्ने र समूह बनाउने कार्य हुन्छ, उनीहरूले पाएका बिभिन्न सुविधाहरू र उनीहरूका विशेषताहरू। तपाईलाई थाहा छ यो के हो, सबै यसमा छन्। यो काम गर्दछ र तथ्या .्क आफ्नै लागि बोल्छ।
Consumers 76% उपभोक्ताहरू व्यापारलाई उनीहरूको प्राथमिकता बारे सचेत हुन आशा गर्छन्।
डेमोग्राफिक्स मूल हो, श्रोता विभाजनको सबैभन्दा सामान्य रूप। तिनीहरू किन हुने थिएनन्? उनीहरूको मुख्य विशेषताहरूमा उमेर, स्थान, र लि ,्गको आधारमा फरक व्यक्ति छुट्याउँदछ, केहि नामको लागि। तर आज, यो विभाजन को सबै-अन्त र सबै-छैन। यो सामान्य हो र उनी कहाँ छन् वा कती पुरानो जस्तै तुच्छ केहि मा आधारित केहि फरक मा पर्याप्त छैन। यो निजीकरण मा परिणाम गर्दैन, यो अनुमानित शिक्षित छ। तपाईका ग्राहकहरू अझ राम्रो छन्।
तपाईंको व्यवसाय अझ राम्रोको योग्य छ। आउटरीच र मार्केटिंग सामग्रीको उचित निजीकरण भविष्यको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ।
प्रकार १: मनोविज्ञानको आधारमा विभाजन
जहाँ डेमोग्राफिक डाटा पोइन्टले हामीलाई बताउँछ को केहि खरीद गर्दैछ, मनोवैज्ञानिक डेटा पोइन्टले हामीलाई भन्दछ किन ती व्यक्तिहरूले यसलाई खरीद गरिरहेका छन्। मनोवैज्ञानिक डेटा कुनै पनि व्यवसाय द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रेरणा लिनका लागि उनीहरूको दर्शकहरूको खरीद व्यवहार। कम्पनीहरू जसले यस किसिमको अनुसन्धान गर्दछ प्रायः ग्राहकमा हेर्छन् मान, जीवनशैली, वर्ग स्थिति, विचार, विश्वास, र दैनिक गतिविधिहरु।
25 गर्न 30
कुनै बच्चा छैन
आय $ २,25,000,०००
दृश्यको ख्याल राख्छ
उत्सुक साइक्लिस्ट र फुटबलर
प्रशस्त खाली समय
युवा पेशेवर; क्यारियर संचालित
छुट्टीहरूको आनन्द लिन्छ
साइकोग्राफिकले मार्केटर्सलाई आफ्नो आउटरीचको निजीकरणको लागि केही जोडी द्वारा अनुमति दिन्छ। उपयोगी, स्वच्छ डाटा विभाजित समान रूपले तिनीहरूलाई भावनात्मक स्तरमा उनीहरूको ग्राहकको भाषामा कुरा गर्न, एक उत्पादन कसरी उनीहरूले प्रयोग गर्दछ र कसरी प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नको लागि, र ती सुविधाहरूमा केन्द्रित गर्न सक्षम गर्दछ जुन उनीहरूलाई सबैभन्दा अपील गर्ने हुन्छ। यसले उनीहरूलाई राम्रो विचार दिन्छ कि जहाँ उत्पादन उनीहरूको जीवनमा मिल्दछ, यसका लागि सन्देश पठाउँदै उनीहरूलाई सशक्त बनाउँदै।
कसरी? मनोवैज्ञानिक विभाजनको लागि दर्शकहरूको बिभिन्न आचरणहरूको विभाजन गर्नु अघि तिनीहरूको विश्लेषणको आवश्यक पर्दछ। यसले स्वैच्छिक संसाधनहरू जस्तै सर्वेक्षण, अन्तर्वार्ता, र क्विज प्रत्येक अन्य सहभागीको बारेमा विशिष्ट डाटा पोइन्टहरू पत्ता लगाउन को लागी गरिएको गुणात्मक अनुसन्धान प्रयोग गर्दछ। प्रश्नहरूले उद्योग-निर्भर विषयहरूको कुनै पनि रकमलाई कभर गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, B2B कम्पनीहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्छन काम-गर्न-गर्न र ग्राहक विकास प्रश्नहरू। प्रश्नको यी लाइनहरूले मद्दत ग्राहक ग्राहकको (ICP) दैनिक काममा कसरी उत्पादन फिट गर्न सकिन्छ भनेर वर्णन गर्दछ, र कसरी तिनीहरूको उत्पादन परिणामहरू छिटो गर्न सक्छन्।
सम्झनु। सटीक निजीकरण र गोपनीयता को एक सीधा उल्लंघन को बीच एक ठीक लाइन छ। स्पष्ट रूपमा, तपाईले उनीहरूको अनुमतिको साथ केवल प्रयोगकर्ताको डेटा स collect्कलन गर्नुपर्दछ, तर तपाईले उनीहरूबाट के माग्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि व्यक्तिगत र आक्रामक हुनु हुँदैन। यस कारणका लागि, यो मनोवैज्ञानिक डेटा प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। राम्रो विचार भनेको उनीहरूको सहयोगको बदलामा ब्याज-विशेष, उपयोगी, फ्रिमियम सामग्री प्रस्ताव गर्नु हो, वा उत्पादन वा भर्खरै विकसित फंक्शनको लागि विशेष प्रारम्भिक पहुँच।
टाइप गर्नुहोस् 2: विभाजन एक ग्राहकको मूल्यमा आधारित
रुचि-आधारित विभाजन विशेष रूपमा सामग्रीको प्रकारमा हेर्छ जुन सम्भावना, नेतृत्व, र अवस्थित ग्राहकहरूको उपभोग गर्दछ। यो विभाजन विशेष गरी ती प्रयोगकर्ताहरूलाई थप फनेलमा धकेल्न डिजाइन गरिएको हो, मान र विशेषज्ञता बाहेक उनीहरूको उत्पादनको खोजीमा उनीहरूलाई खोज्दै। उदाहरण को लागी, यदि हाम्रो सम्भावितहरु मध्ये कुनै एकले हाम्रो मेलिंग सूचीमा साइन अप गरे किनभने तिनीहरूले हाम्रो चिसो ईमेल इ-पुस्तक डाउनलोड गरे, तब हामी उनीहरूलाई चिसो ईमेलमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूको समूहमा राख्न सक्दछौं।
केवल किनभने सम्भावनाले तपाईंको सामग्री पढिरहेको छ यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूले तपाईंको उत्पादन खरीद गरिरहेका छन्।
माथिको कथन धेरै सत्य छ। तर मूल्यमा आधारित बिक्रीको सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझिनु र किन प्रबल पार्नुमा आधारित छ किन मेरो उत्पादन एक संभावना लाई उपयोगी छ। यदि मैले ध्यान दिएँ कि तिनीहरू मेरो चिसो ईमेल गाईडहरू डाउनलोड गर्दै छन्, तब तिनीहरू सम्भवतः मेरो विषय रेखा ब्लग पोष्टहरू जस्तो अधिक चिसो ईमेल सामग्रीमा रुचि राख्नेछन्; मेरो 'कसरी कुनै पनि ईमेल ठेगाना फेला पार्ने' واکथ्रु।
अन्ततः, बजारहरूले यो आउटरीच मापन गर्न सक्दछन् र सम्भावनालाई थप तल राख्न सक्छन् उनीहरूको उत्पादनको बिक्री-नेतृत्व प्रदर्शन प्रदर्शन गरेर। तिनीहरूको पुरस्कार उनीहरूको इनपुटबाट प्राप्त गरिएको दृश्य, माल्याउने आउटपुट हो। अगाडि बढ्न, तिनीहरू व्यापक प्रतिक्रिया ईमेलहरू पठाउन सक्षम छन्, उनीहरूको प्रदर्शन विश्लेषण र राम्रो जवाफ दरहरूको लागि उनीहरूको प्रदर्शन अनुकूलन गर्न अघि।
टाइप गर्नुहोस् 3: विभाजन एक व्यवसाय को मूल्य मा आधारित
मूल्य-आधारित विभाजन एक सेग्मेन्टेसन रणनीति हो जसले सम्भाव्यता, लिड्स, र ग्राहकहरूलाई समूहमा समूहमा उनीहरू कसरी कति मूल्य प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने आधारमा राख्छ। सामान्यतया म यो विशेष गरी निजीकरण ड्राइभि se विभाजन प्रविधी मा विचार छैन। तर, महामारीले व्यापार विश्वलाई के गरेको छ पछि, यो अगाडि बढ्ने प्रभावकारी र अप्रभावी विभाजन बीचको भिन्नता हुनेछ।
खरीद शक्ति भर्खरै भयो so अप्रत्याशित। महामारी र यसको पछिका लकडाउहरू मार्ग बिभिन्न व्यवसायहरुलाई प्रभावित बिभिन्न उद्योगहरुमा पूरै विसंगत छ। उदाहरण को लागी, धेरै जसो ईकामर्स आउटलेटहरू फस्टाएको छ, तर ट्राभल कम्पनीहरु उनीहरुका घुँडामा ल्याइयो। बेच्ने व्यवसायहरु लाई यो पहिचान गर्न आवश्यक छ र यसको माथि जान्नुपर्दछ, उनीहरूका ग्राहकहरु लाई कसरी प्रभावित गरीन्छन्। त्यसो भए, तिनीहरूले व्यक्तिगत, समानुभूतिपूर्ण सामग्री र आफ्ना ग्राहकहरूलाई मद्दतको लागि प्रस्ताव गर्न सक्दछन्।
कसरी? व्यवसायहरुलाई एक कुराकानी ग्राहक अनुभव रोजगार गर्न आवश्यक छ। बस्नुहोस् र रद्द अनुरोधको लागि कुर्नुहोस्; कुनै पनि लेनदेन सम्बन्धी प्रश्नहरू वा बिक्री पिचहरू जुन उनीहरूसँग सम्बन्धित हुनसक्दछ। चिन्ता, समानुभूति, फेलोशिप, र उनीहरूको आवश्यकताको समयमा उनीहरूलाई मद्दत गर्न इमान्दार इच्छा देखाउनुहोस्। एक कदम अगाडि रहनुहोस्, र तपाईं पछाडि ढल्नुहुनेछैन।
कम्पनीहरूलाई ब्राकेटमा राख्नुहोस् कति कडा हिर्काएकोमा आधारित छ। यदि तिनीहरूले कष्ट भोगेका छन् भने, तिनीहरू अधिक छूट अफरहरूको फाइदा लिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि तिनीहरू फलफूल हुँदैछन् भने तिनीहरू समान उत्पादनहरूको बिक्रीका लागि तयार हुन सक्छन्।
टाइप गर्नुहोस् 4: विभाजन स Eng्लग्नताको आधारमा
हाम्रो मा अन्तिम पाठ उन्नत विभाजन वर्गसँग श्रोता खण्ड हुनुपर्दछ यसले कसरी ब्रान्डको साथ संलग्न गर्दछ। यो मनोवैज्ञानिक विभाजनको उपसेट हो, र यसले कसरी सम्भावितता, नेतृत्व, र अवस्थित ग्राहकहरूलाई प्लेटफर्मको स्पेक्ट्रम भरिको ब्रान्डमा व्यस्त राख्दछ भनेर विचार गर्दछ। यो सामाजिक मिडिया हो, यो खुला दरहरू हो, क्लिक क्लिकहरू हुन्, र यो कुन खास उपकरणहरूले उनीहरूको सामग्री उपभोग गर्न प्रयोग गर्छन्।
तीन मुख्य कारक सगाई ड्राइव:
प्रासंगिकता, फ्रिक्वेन्सी, कल-टु-एक्शन।
यदि तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि तपाईंको सम्भावनाले तपाईंको ईमेलहरू खोल्दैन भने, तिनीहरूलाई सात थप फलो-अप ईमेलहरू पठाई समय बर्बाद गर्नु आवश्यक पर्दैन। यसको विपरीत, तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि एक सम्भावनाले नियमित तपाईंको ईमेलहरू खोल्दछ तर प्रतिक्रिया गर्दैन। यो तिनीहरूलाई उच्च सगाई समूहमा राख्न लायकको हुन सक्दछ जुन अनुगमनको लागि खुला छ वा आउटरीचको फरक लाइन आवश्यक पर्दछ।
निजीकरण विषय रेखाहरूको A / B परीक्षण हो, सही खोल्नको लागि जुन तिनीहरूको खुला खोल्दछ। यो दर्जी-निर्मित प्रस्तावहरू तिनीहरूको स subject्लग्नता र रूपान्तरणको संभावना बढाउन ती विषय लाइनहरूमा छेडिन्छ। यो इनिमेसन पठाउँदै छ इष्टतम समयमा यसलाई खोल्नको लागि। यसले समयको सहि रकम पठाउँदैछ, त्यसैले तपाईं आफ्नो प्राप्तकर्तालाई अभिभूत वा अन्धाकुल नहुनुहोस्।
कसरी? सगाई सेगमेन्टहरू प्रत्येक अन्तर्क्रिया ट्र्याकिंग ईमेल ट्र्याकिंग परिणामहरूको आधारमा गर्न सकिन्छ। सामान्यतया: यसमा रोजगार सफ्टवेयर समावेश हुन्छ जसले ईमेलमा सानो ट्र्याकिंग पिक्सल सम्मिलित गर्दछ। जब यी ट्र्याकिंग पिक्सेलहरू खोल्छन्, यसले ट्र्याकि client ग्राहकको सर्भरहरूमा डाउनलोड अनुरोध पठाउँदछ। योaको रूपमा गणना गरिएको छ दृश्य। त्यसबाट, प्रयोगकर्ताहरूले देख्न सक्दछन् कि, कहिले, र कुन उपकरणमा उनीहरूको सामग्री खोलिएको छ।
सम्झनु। मँ स्पष्ट रूपमा यस उदाहरणमा ईमेललाई सन्दर्भ गरिरहेको छु किनभने मेरो ठाउँ यस्तो छ। ईमेल मार्केटिंग आउटरीचको सबैभन्दा परम्परागत फारम हो, निश्चित। जब हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्छौं, हामी देख्छौं अधिक र अधिक प्लेटफर्महरू मंचमा आउँछन्, जस्तै लाइभ च्याटहरू, सोशल मिडिया, र आन्तरिक समुदाय प्लेटफर्महरू। हामीले यी अन्तर्क्रियाहरू पनि ट्र्याक गर्नुपर्नेछ र ती प्रत्येक बिभिन्न च्यानलहरूको ब्यक्तिगत अनुभव ब्यबस्था राख्नु पर्छ।
दर्शक विभाजन जनसांख्यिकीय भन्दा पर जान्छ। यो क्रेता प्रेरणा र स्थितिहरु मा हेर्छ। यो उनीहरूले के चाहान्छन् भनेर हेर्छ त्यसोभए तपाईं उनीहरूलाई चाहिने चीजहरू दिन सक्नुहुन्छ। यो आज विकासको कुञ्जी हो।
त्यसोभए बढ्दो गरौं।
टैग: गतिविधिहरुदर्शक संलग्नतादर्शक विभाजनविश्वासहरूक्रेता प्रेरणाक्रेता विभाजनवर्ग स्थितिग्राहक मूल्य विभाजनजनसांख्यिकीईमेल मार्केटि se विभाजनजीवन शैलीमार्केटिंग स्वचालनमार्केटि auto स्वचालन विभाजनमार्केटिgment विभाजनरायनिजीकरणमनोवैज्ञानिकमनोवैज्ञानिक प्रोफाइलमनोवैज्ञानिक विभाजनबिक्री बलविभाजनमान